Yesu Bɔɔ Mpae wɔ Getsemane Turo Mu | Yesu Asetena
YESU KƆƆ GETSEMANE TURO MU
NE HO FIFIRE YƐƐ SƐ MOGYA A ƐRESOSƆ
Bere a Yesu ne asomafo anokwafo dubaako no wiee adidi no, wɔbɔɔ mpae. “Wɔtoo ayeyi dwom wieeɛ no, wɔfirii adi kɔɔ Ngo Bepɔ no so.” (Marko 14:26) Wɔde wɔn ani kyerɛɛ nifa fam kɔɔ Getsemane turo no mu. Ná ɛhɔ yɛ baabi a wɔtaa kɔ.
Getsemane turo no, na ngo nnua nyɛ na wɔ hɔ. Yesu ne asomafo no kɔduu hɔ no, ɔgyaa wɔn mu nwɔtwe wɔ akyi. Ebia turo no kwan ano hɔ ara na ɔgyaa wɔn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Montena ha na merekɔ nohoa akɔbɔ mpaeɛ.” Afei ɔfaa Petro, Yakobo ne Yohane kaa ne ho kɔɔ turo no mu baabi. Ná nneɛma ahyɛ ne so, enti ɔka kyerɛɛ asomafo mmiɛnsa no sɛ: “Awerɛhoɔ ahyɛ me kra mã kɔsi owuo mu. Montena ha na mo ne me nwɛn.”—Mateo 26:36-38.
Yesu kɔɔ n’anim kakra no, “ɔbutuu fam firii aseɛ bɔɔ mpaeɛ.” Dɛn paa na ɔbɔɔ ho mpae saa bere no? Ɔbɔɔ mpae sɛ: “Agya, biribiara nso wo yɛ; yi kuruwa yi firi me so. Nanso ɛnyɛ deɛ mepɛ, na mmom deɛ wopɛ.” (Marko 14:35, 36) Asɛm a ɔkae no kyerɛ sɛn? Ná wanu ne ho sɛ ɔde ne nkwa rebɛbɔ afɔre anaa? Dabi!
Bere a Yesu wɔ soro no, ɔhuu sɛnea na Romafo no taa di nkurɔfo ani ku wɔn yayaayaw. Wɔwoo no baa asase so no, ɔbɛyɛɛ nnipa a ɔwɔ atenka te sɛ yɛn ara. Nea na ɔrebɛfa mu no, na ɔbɛte yaw paa, nanso ɛnyɛ ɛno koraa ho na na ɔredwen. Ɔhuu sɛ ɔrebɛwu sɛ ɔbɔnefo ama animguase aka n’Agya din. Ɛno ne ade a ɛhyɛɛ ne so maa ɔdii awerɛhoɔ. Ná aka kakraa bi ama wɔabɔ no asɛndua mu te sɛ obi a waka abususɛm atia Onyankopɔn.
Yesu bɔɔ mpae no ara kɔduu baabi no, ɔkɔɔ asomafo mmiɛnsa no nkyɛn, na ɔduu hɔ no, na wɔadeda hatee. Ɔka kyerɛɛ Petro sɛ: “Moantumi ne me anwɛn dɔnhwere baako mpo? Monkɔ so nwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu.” Yesu huu sɛ asomafo no nso abrɛbrɛ, na afei ade asa. Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Honhom no deɛ, ɛpɛ, nanso honam no yɛ mmerɛ.”—Mateo 26:40, 41.
Yesu kɔtoaa ne mpaebɔ no so. Saa bere no, ɔka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔnyi “kuruwa yi” mfiri ne so. Asomafo mmiɛnsa no, anka ɛsɛ sɛ wɔwɛn na wɔankɔ sɔhwɛ mu, nanso Yesu san bae no, na wɔasan adeda. Bere a Yesu bisaa wɔn no, na “wɔnhunu mmuaeɛ a wɔmfa mma no.” (Marko 14:40) Yesu kɔbuu nkotodwe bɔɔ mpae ne mprɛnsa so.
Kae sɛ na Yesu rebɛwu sɛ ɔbɔnefo, na na animguase bɛka n’Agya din, enti na ɛho asɛm haw Yesu paa. Yehowa tiee ne Ba no mpaebɔ, na ɛduu baabi no, ɔsomaa ɔbɔfo bɛhyɛɛ no den. Ɛno mpo amma Yesu annyae mpae no bɔ; ɔkɔɔ so bɔɔ “mpaeɛ dendeenden.” Ná nneɛma mu ayɛ den ama Yesu paa, efisɛ nea ɛreba no, na ani soso. Sɛ ɔdi nkogu a, na ɛbɛtumi ama daa nkwa a ɔno ara bɛnya ne nnipa nyinaa de ho aba asɛm. Ɛduu baabi koraa deɛ, “ne ho fifire yɛɛ sɛ mogya a ɛresosɔ gu fam.”—Luka 22:44.
Yesu baa bio no, ɔsan bɛtoo asomafo no sɛ wɔadeda. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Berɛ a ɛte sei mu na moada regye mo ahome! Hwɛ! Dɔn no abɛn sɛ wɔyi onipa Ba no hyɛ nnebɔneyɛfoɔ nsa. Monsɔre, momma yɛnkɔ. Hwɛ! Deɛ ɔbɛyi me ama no abɛn.”—Mateo 26:45, 46.
NE HO FIFIRI YƐƐ SƐ MOGYA A ƐRESOSƆ
Bere a oduruyɛfo Luka kaa sɛ Yesu ho fifiri “yɛɛ sɛ mogya a ɛresosɔ” no, wankyerɛkyerɛ mu. (Luka 22:44) Ɛbɛtumi aba sɛ na Luka reyɛ ntotoho de akyerɛ sɛ fifiri tee Yesu sɛnea ekuro bi retu mogya no. Afei Oduruyɛfo William D. Edwards de nkyerɛkyerɛmu foforo baa ne nwoma bi mu sɛ: ‘Sɛ obi kɔ ahoyeraw mu paa a, mogya tumi ba ne fifiri mu, ɛwom, ɛnyɛ biribi a ɛtaa si. Sɛ mogya didi kɔ honam no mu baabi a fifiri fa no a, ɛtumi pue honam ani.’—The Journal of the American Medical Association (JAMA).
Bere a Yesu ne asomafo no fii abansoro dan no mu no, ɛhe na wɔkɔe?
Bere a Yesu rebɔ mpae no, dɛn na asomafo mmiɛnsa a ɔne wɔn kɔe no yɛe?
Bible kaa sɛ Yesu ho fifiri yɛɛ sɛ mogya a ɛresosɔ. Adɛn nti na saa asɛm no ma yɛhu sɛ na Yesu ho yeraw no paa?